वास्तु शास्त्रका अनुसार घरको कुन स्थानमा कस्तो रङ्ग लगाउने ? – Tungoon
वास्तु शास्त्रका अनुसार घरको कुन स्थानमा कस्तो रङ्ग लगाउने ?
काठमाडौं । असार ८ गते
वास्तु शास्त्र प्राचीन विज्ञान हो। वास्तुको अर्थ हुन्छ आवासगृह अर्थात् घर र शास्त्रको अर्थ हुन्छ अनुशासन र निर्देश।यसर्थ, “वास्तु शास्त्र” भन्नाले घर वा कुनै संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निर्देशलाई बुझिन्छ । वास्तु शास्त्रलाई आधुनिक समयको विज्ञान र आर्किटेक्चरको प्राचीन स्वरुप मान्न सकिन्छ। हिन्दु धर्म
अनुसार वास्तु शास्त्रको पालन गरी बनाइएको घरमा बस्दा सुख, शान्ति एवं समृद्धि प्राप्त हुन्छ।
वास्तु शास्त्र अनुसार घर बनाउदा घरका हरेक कुराहरुलाई ध्यानमा राखिन्छ। प्रवेशद्वार, भान्सा, पूजास्थल, पाहुना कोठा आदि सबै भागको बिशेष ध्यान राखिन्छ। वास्तु शास्त्रका अनुसार घरको कुन स्थानमा कस्तो रङ्ग लगाउन भन्ने कुराको बिस्तृत जानकारी दिईएको छ।